Waddo si isxilqaanka ah lagu dhisayey oo u istaagay dhaqaalo yari darteed – SOMA: Somali Media Association
Waddo si isxilqaanka ah lagu dhisayey oo u istaagay dhaqaalo yari darteed
Dhismihii ka socday wadada u dhaxeysa Magaalooyinka Guriceel & Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud oo ah Lixdan iyo Shan KM ayaa gabi ahaanba joogsatay kaddib markii dadkii waday Ololaha Midow Bulsho ay u awoodi waayeen in ay sii wadaan Howshaan dhaqaalo yari darteed.
Daahir Maxamuud oo ah Godoomiyaha Ururka howsha is xilqaanka ah waday sheegaya in markii horaba ay ku bilaabeen lacago aan badneyn oo ay kasoo aruuriyeen qeybaha kala duwan ee Bulshada si ay wadadaan u noqodo mid nadiif ah.
Waxa uu tilmaamay in aysan soo gaarin dhaqaalo ku filan, taas oo wax ka qaban karta Wadadaan, maadaama ay dhibaato xooggan ku qabeen dadka deegaanka & kuwa ku safra Wadadaan.
“Waxaan Howshan soo bilownay 19-kii bishii Sepmteper ee 2019-kii hadaan nahay gudiga midow bulsho anagoo la kaashaneyna shacabka inuu isagu dhisto.”Balse hada howshii socotay waxa ay u joogsatay mudo ilaa shan bil ah wuxuu la istaagay dhaqaalo la’aan iyo dayn lagu yeeshay dhismaha wadada taa oo sababtay in howshu socon weyday.”
Gudoomiye Daahir ayaa sidoo kale SOMA u sheegay in wadada oo ah 65 KM, hadda ay u suura gashay in ay dhisaan ilaa Saddex & Toban KM, tabartooduna aysan dhaafsiisneyn.
Balse waxa uu xusay in aysan ka niyad jabin sii wadida howshan, dhawaanna ay gudi kala hadli doonaan howshii sidii dib loogu bilaabi lahaa, arrintan ay si xooggan ay ugu howlan yihiin.
“Dhibaatada wadada oo shacabka dhinacyo badan ka saameysay, sida in gaadiidka wadada ku safraya ku baaba’aan in masaafo socodkeedu qaato saacado badan, dadka oo kala so kulma rafaad madaama wadadu godad iyo bur-bur ay tahay ayaan an u wanaagsaneyn gaadiidka loo is ticmaalo. Ka midow bulsho ahaan waxan ku balansanahay inaan kulano oo aan ka arinsano sidii aan howshii istaagtay markale bulshada ugu bilaabi laheyn. Ayu yiri godomiyuhu.”
Bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa waday howshaan intii u dhaxeysay Bishii September ee 2019 oo uu bilowday ilaa Bishii August ee sanadkii lasoo dhaafay, iyaga oo waqtigooda qeyb kamida usoo huray.
Maxamed Daahir Guuled oo ka mid ah dadka deeganka ee ka qayb qaadan jiray howsha is xilqaanka ah ee wadada lagu dhisayo, ayaa sheegaya in uu Todobaadkiiba Saddex maalin uu usoo shaqo tagi jiray, maadaama ay tahay mid bulsho, uuna u dareemayey Waajib saran in ay tahay Gudashadeeda.
Maxamed ma jecleysan in uu istaago dhismaha Wadadaan, maadaama uu dareensan yahay in faa’iido badan ay u laheed bulshada Gobolka.
“Waxa ay aheyd howl wanaagsan oo juhdi iyo dhaqaalo badan lagu bixiyay, anigu waxaan oga qayb qaadan jiray xogeyga oo aan isbuuc walba sedec maalin dhagaxa & jeyga an wax ka dal dali jiray. rajo ayanka qabnay in la dhameyn doono oo usan istaagin is xilqaanka shacabka, hada kuma faraxsani iney istaagto waayo in dhibaatada wadadan shacabku gacmihiisa isaga saaro ayaa aheyd guul balse hada xitaa ma aqaano sababta loo joojiyay, ayuu yiri Maxamed.”
Dhibaatada ugu weyn ee bur-burka wadadan waxa kala kulma wadayaasha gaadiidka waaweyn ee ku safra inta badan Xolahana u qaada Dekadaha Barbera & Boosaaso ee Gobolka Bari si loo dhoofiyo.
Jaamac Maxamuud waa mid kamida Darawalada ku safra wadadaan, wuxuu ii sheegay in bur-burka wadada owgiis gaadhiga iyo xoolahaba dhib badan soo gaaraan iyado xitaa ay dhacdo in qaar kamida xoolaha ay geeriyoodaan, ama biraha baabuurka midkood ay jabto.
Waxa uu tilmaamay safarka wadadaan ay waqti badan ku qaadan jirtay maristeeda, balse ay sii qiyaasayaan in marka uu dhamaado dhismaheeda ku qaadan karto wax yar.
Waxa uu xusay in Saddex ilaa Afar maalin ay dhici jirtay in ay ku gaaraan halka ay u safrayaan, kaalintoodana ay ka qaadanayaan haddii ay dhaceyso dhameystirka howshan wanaagsan ee qeybyada gashay.
“Bur-burka wadada waxaan kala kulanaa dhib farabadan gaadhigu safarkaste waxaa inaga soo gaaro inaan wax badan ka badalno oo kharashbaa nagu gala. Sidoo kale xoolaha aan qaadno qaarbaa iyagoo nabad qabin aan geynaa oo xoolaa safarka ku sii bakhtiya. Noma wanaagsana in la joojiyo howshii socotay, ayuu yiri Jaamac.”
WQ: Cabdi Qadar Xasan oo ka tirsan Radio Galgaduud
SOMA oo Tababar uga Fartay Jowhar Wariyayaasha Ka howlgalo Hir-shabelle
Sidee ayey Beeraleydu uga hortagi karaan Ayaxa xaalufinta ku haaya Beerahooda?